UNotoane ubonga ukufika kwabadlali
UKAPUTENI weqembu lakuleli le-Under 23 uTercious Malepe angase awuqale umdlalo kusasa uma sebebhekene neZambia kowokuvula ngo-8 ebusuku Isithombe: BACKPAGEPIX
LUNGILE MAJOKA | November 8, 2019
KUBUYE ithemba kumqeqeshi weqembu lesizwe lika-Under 23, uDavid Notoane, lijoyinwa ngabadlali abathathu okunyusa isibalo sabadlali abasekhempini siye kwabawu-15 ngaphambi komdlalo wayo wokuvula kwi-Africa Cup of Nations kule mpelasonto.
UNotoane ubehambe ekuqaleni kwesonto elibhekise e-Egypt nabadlali abawu-12 ngemuva kokulimala kukaPhakamani Mahlambi iMamelodi Sundowns idlala neChippa United koweTelkom Knockout ngempelasonto edlule.
Kuwona lo mdlalo umdlali weChippa uTercious Malepe uphume ngekhadi elibomvu, okusho ukuthi naye useyingxenye yeqembu lesizwe elizodlala neZambia emdlalweni wokuvula kusasa.
Umdlalo use-Al Salam Stadium kusasa ngo-8 ebusuku.
Abanye abadlali abafike noMalepe, uKeletso Makgalwa weSundowns okuzovalwa ngaye isikhala sikaMahlambi, unozinti uMondli Mpoto naye imdedelile iBloemfontein Celtic.
UNotoane umemezele abadlali abawu-21 okumele ayodlala ngabo e-Egypt ukulwela ukuzibekisela indawo kuma-Olympic eTokyo ngo-2020. Kodwa uhambe nabadlali abangaphelele ngoba amanye amaqembu awazange abakhululile abadlali njengoba lo mqhudelwano ungekho ngaphansi kwekhalenda leFifa.
Athembise ukuthi azobakhulula ngemuva kwemidlalo yale mpelasonto okuzoqala ngayo izinsuku zeFifa ngoNovemba 11-20.
“Laba badlali banyusa isibalo siye ku-15. Lokhu kuzophinde kunyuse nezinga lokuqina kweqembu njengoba siqhubeka namalungiselelo omdlalo neZambia. Siyajabula ngokuthi bakwazile ukusijoyina. Siyakubonga ukwesekwa ngamaqembu, iMamelodi Sundowns, iBloemfontein Celtic neChippa United siyajabula ngokuthi babadedele abadlali ekubeni bebengabagcina baze babadedele ngekhefu leFifa njengokwesivumelwano. Siyabonga. Lokhu sekuletha ukuzethemba eqenjini,” kusho uNotoane kwiSafa Media.
Iqembu likaNotoane libe nomdlalo wobungani neZamalek.
“Bekuwumdlalo omuhle njengoba eqenjini sinomdlali ka-2001 uKeagan Johannes ozobe eqala ukudlala kwi-Under 23.Uma ungenayo enye indlela ongenza ngayo uya emdlalweni omkhulu njengalona ubudinga ukumbona ukuthi angakwenzelani. Ukhombisile ukuthi kungani simqokile eqenjini,” kusho uNotoane.